Erwe akpaghachị Codec nke Bandicam - Otu esi dozie
Editor Si NhọRọ December 14,2019
Otu esi eji bandicam
A na-eji usoro bandicam mgbe ịchọrọ ịdebe vidiyo site na kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-edekọ webinars, nkuzi vidio ma ọ bụ egwuregwu na-agafe, usoro a ga-enyere gị aka. Isiokwu a ga-eleba anya otu esi eji ọrụ dị iche iche nke Bandikam mee ka ọ bụrụ na ịdekọ faịlụ vidiyo dị mkpa ma nwee ike ịkekọrịta ha.
Esi ewepu videomarket Bandicam na vidiyo
Ndị ọrụ nke mbipute free nke Bandicam maara ọnọdụ ahụ mgbe ikikere Bandicam na-egosi na video a weghaara. N'ezie, nke a na-emepụta nsogbu maka ịzụ ahịa na iji nweta akara mmiri ya. Maka ọrụ ọkachamara ọ dịghị mkpa. Iji wepụ ya, ịkwesịrị ime ihe ole na ole dị mfe.
Esi gbanwee olu na Bandicam
Mgbe ịdekọ vidiyo site na iji Bandicam, ịnwere ike ịgbanwe olu gị. Ka e were ya na ị na-edekọ maka oge mbụ na ntakịrị ihere nke olu gị, ma ọ bụ na-achọ ka ọ dịtụ ntakịrị. Isiokwu a ga-eleba anya otu ị ga-esi gbanwee olu na vidiyo. Kpọmkwem na Bandicam enweghị ike ịgbanwe olu.
Otu esi choputa windo anya na Bandicam
Nhọrọ nke windo elebara na Bandicam dị mkpa maka ndị ahụ mgbe anyị dekọtara vidiyo site na egwuregwu ma ọ bụ usoro ọ bụla. Nke a ga - eme ka ị gbaa oge kpọmkwem ebe windo ihe omume ahụ dị oke mkpa ma ọ dịghị mkpa ka anyị gbanwee ọnụ ọgụgụ nke vidiyo ahụ na aka. Ịhọrọ windo lekwasịrị anya na Bandikami na usoro ihe mmasị anyị dị mfe.
Esi edozi Bandicam ka idekọ egwuregwu
Nnukwu ewu na Ị Tube jiri vidiyo na nyocha na ntụgharị nke egwuregwu kọmputa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ọtụtụ ndị debanyere aha ma gosipụta ihe ndị ị rụzuru egwuregwu - ị ghaghị idekọ ha ozugbo site na kọmputa na-eji Bandicam. N'isiokwu a, anyị ga-ele anya ọtụtụ ntọala dị mkpa ga-enyere gị aka ịse vidiyo site na Bandikam na ọnọdụ egwuregwu.
Esi edebanye aha na Bandicam
Achọrọ ịdebanye aha Bandicam iji mee ka ọnụego vidiyo kachasị dị elu ghara ịdị na ya ma ghara iji akara mmiri nke usoro ihe omume ahụ. Ka e were ya na ị ebudatala Bandik, mara onwe gị na ọrụ ya ma chọọ iji usoro ahụ rụọ ọrụ. Ndebanye aha pụtara ịzụta usoro ihe omume n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ, dịka ọmụmaatụ, na kọmputa maọbụ abụọ.
Otu esi agbanye igwe okwu na Bandicam
Onye ọrụ nke na-edekọ vidiyo site na kọmputa nwere ike ịjụ otu esi edozi Bandikami ka i wee nụ m, n'ihi na ịdekọ webinar, ihe nkuzi, ma ọ bụ ihe ngosi weebụ, usoro vidio ezughị; Usoro usoro Bandicam na-enye gị ohere iji igwefoto weebụ, nke a na-etinye n'ime ma ọ bụ nkwụnye n'ime okwu iji dekọọ okwu na inwekwu ezi okwu ma dị elu.
Nkọwa codec njehie - nsogbu nke na-eme ka o sie ike idekọ vidiyo site na kọmputa. Mgbe agbapụ malitere, windo njehie gosipụtara na mmemme ahụ nwere ike mechie na-akpaghị aka. Esi edozi nsogbu a ma debe vidiyo? Ihie njehie nke H264 codec yiri ka ọ na-emetụta ọgba aghara n'etiti ndị ọkwọ ụgbọala Bandicam na kaadị vidiyo ahụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Bandicam 2019